Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo saraakiisha dowlada ku noqotay jid naar ka bood ah
Updated About:330 days ago 0
Kadib marki ay ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM la wareegeen deegaanada isku xira Afgooye ilaa iyo magaalada Muqdisho saraakiisha kumeysan fikireyn in ay weeraro jid gal ah kala kulmayaan Al Shabaab.
Hada jidka Laamiga ah way adagtahay in gaadiid kolonyo ah oo ay leedahay dowlada ay ku maraan si nabad ah, maxaa yeelay Al Shabaab ayaa jidka u galaya oo weeraraya.
Ku dhawaad 10 weerar oo sababay qasaaro kala duwan ayey Al Shabaab ka geysteen deegaanada Ceelasha Biyaha, Siinka Dheer, Lafoole, iyo deegaano kale oo ku teetsan jidka laamiga ah.
Jimcihi lasoo dhaafay weerar gaadma ah oo ay ka geysteen gudaha Ceelasha Biyaha ayaa waxay ku dileen talihii deegaanka Ceelasha Biyaha Afrax Cali Afrax iyaga oo horayna u qaatay meydkiisa inkastoo marki danbe laga soo dhigay.
Weeraradaasi waxaa ku jiray weerar jid gal ah oo ay ku sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya xilli uu ku socday jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye.
Isku soo wada duuboo waxaa ku adkaan doonto ciidamada dowlada iyo AMISOM in ay xakameeyaan weerarada kaga imaanaya dagaalyahanada Al Shabaab ee ku jira baadiyaha deegaanadaasi ee weerarada gaatiinta ah ku qaada kolonyooyinka mara wadadaasi.